User:Hintha/ဗဟိုစာမျက်နှာအကြံ - ဝီကီပီးဒီးယား
အကြောင်း · ပြင်ဆင်မှု · မေးခွန်းများ · အကူအညီ · Guestbook
၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉, ၁၁:၀၂
This site uses Unicode 5.2 Standard for encoding the Myanmar/Burmese script. You can download Myanmar Unicode Font here. You can find the list of keyboard drivers following Unicode 5.2 standard here .
Note: If you are looking for the Malay language Wikipedia, it is available here.
မည်သူမဆို အခမဲ့ကြည့်ရှုပြင်ဆင်နိုင်သော အင်တာနက်စွယ်စုံကျမ်း ဖြစ်ပါသည်။
ဝီကီပိဒိယသည် သုံးစွဲသူများမှ ပူးပေါင်းရေးသားတည်းဖြတ်သော စွယ်စုံကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဝီကီ ဟုခေါ်သော ဝဘ်ဆိုက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုအသုံးပြု၍ထိုသို့ပူးပေါင်းရေးသား ခြင်းကိုအဆင်ပြေစေရန်စီမံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူပေါင်းများစွာမှ နာရီအလိုက်ပြင်ဆင်မှုပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်၍ ဝီကီပိဒီယကို ပို၍ပို၍ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။
က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ဉ | ည
ဟ ဠ အ ဣ ဤ ဥ ဦ ဧ ဩ ဪ
ဇီဝဗေဒ - (သဘာဝ - လူ - ဆေးပညာ - တိရစ္ဆာန် - အပင် - စိုက်ပျိုးရေး) - ဓာတုဗေဒ - (ဒြပ် - ဒြပ်စင် - ဒြပ်ပေါင်း - ဓာတ်) - ရူပဗေဒ - (အဏုမြူ - အဟုန်) - ဘူမိဗေဒ - (ကမ္ဘာ -မြေ - ရေ)
နက္ခတ္တဗေဒ - လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ - ဆက်သွယ်ရေးစနစ် - လျှပ်စစ်ဓာတ်အား - အီလက်ထရွန်းနစ် - ကွန်ပြူတာ - ကရိယာ - အင်တာနက် - စက်ရုပ် - လက်နက် - ထုတ်လုပ်မှု
ဂဏန်း - နံပါတ် - ကိန်း - ကိန်းရှင် - အပိုင်းဂဏန်း - ဆယ်လီစနစ် - ဒသမ - ရာခိုင်းနှုန်း - အနှုတ် - အပေါင်း - အမြှောက် - အလီ - အစား - ဂျီဩမေတြီ - အက္ခရာသင်္ချာ - ညီမျှခြင်း - ကဲကုလ - စာရင်းအင်းပညာ - စီးပွါးရေးပညာ
မနုဿဗေဒ - ပညာရေး - (ကျောင်း - ကောလိတ် - တက္ကသိုလ် - ကျူရှင် - သုတ) - လူထော - လူ့ဘဝ - မိသားစု - သဘာဝတ္ထဗေဒ - ဒဿနပညာ - ဘာသာဗေဒ - ဥပဒေပညာ - လူမျိုး - စက်သွယ်ရေး - နိုင်ငံရေး
စာပေ (ကဗျာ - ဝတ္ထု - ဇာတ် - သီတင်းစာ - စာစီစာကုံး) - အက - ရုပ်ရှင်ပညာ - ဂီတ - ရုပ်မြင်သံကြား - သဘင်ပညာ - ဗိသုကာပညာ - ပန်းဆယ်မျိုး (ပန်းထိမ် - ပန်းပဲ - ပန်းတဉ်း - ပန်းပု - ပန်းပွတ် - ပန်းချီ - ပန်းယွန်း - ပန်းတော့ - ပန်းတမော့ - ပန်းရန် - ပန်းရွဲ)
အားကစား (ဘတ်စကက်ဘော - ဘောလုံး - ခြင်းလုံး - ရေကူး) - ဘာသာဗေဒ (အက္ခရာ - ဘာသာစကား - စကား - အရေး - သဒ္ဒါ) - အနုပညာ - ဘာသာတရား - (ဗုဒ္ဓ - အစ္စလာမ် - ခရစ်ယာန် - ဟိန္ဒူ) - ဂန္တဝင် - ဝါသနာ - အစားအစာ - ဗေဒင် - လက္ခဏာ
ဂြိုဟ် - ကမ္ဘာ - တိုက် - (အာရှ - ဥရောပ - အာဖရိက - ‌မြောက်အမေရိက - တောင်အမေရိက - ဩစတြေးလျ - အန္တာတိက) - တိုင်းပြည် - ဒေသ - မြေပုံဆွဲပညာ - သတ္တုဗေဒ - ဇလဗေဒ - သမုဒ္ဒရာ (အဏ္ဏဝါ) - တောင် - ရိုးမ - မြစ် - ပင်လယ်
နိခါတကဗေဒ - ရှေးဟောင်းသုတေသန - ကျောက်ခေတ် - ရေခဲခေတ် - ကြေးခေတ် - သံခေတ် - အမှောင်ခေတ် - စစ်တပ်ခေတ် - အလယ်ခေတ် - နယ်ချဲ့စနစ် - ဗြိတိသျှအင်ပါယာ - ကမ္ဘာ့မထမစစ် - ကမ္ဘာ့ဒုတိယစစ် - မြန်မာ့သမိုင်း
ဆောင်ပါး ၂,၀၀၀,၀၀၀ ရွက်ထို့ထက်ရှိ -
ဆောင်ပါး ၃၀၀,၀၀၀ ရွက်ထို့ထက်ရှိ -
Deutsch (ဂျာမနီ) - Español (စပိန်) - Français (ပြင်သစ်) - Italiano (အီတလီ) - 日本語 (ဂျပန်) - Nederlands (နယ်သာလန်) - Polski (ပိုလန်) - Português ( ပေါ်တူဂီ) - Русский (ရုရှ)
ဆောင်ပါး ၁၀၀,၀၀၀ ရွက်ထို့ထက်ရှိ -
Català (ကာတလန်) - Čeština (ချက်ကီးယား) - Esperanto (အက်စပယ်ရန်တို) - Suomi (ဖင်လန်) - Magyar (ဟန်ဂေရီ) - Norsk (bokmål) (နော်ဝေး) - Română (ရိုမေးနီးယား) - Svenska (ဆွီဒင်) - Türkçe (တူရကီ) - Українська (ယူကရိန်) - 中文 (တရုတ်)
ဆောင်ပါး ၅၀,၀၀၀ ရွက်ထို့ထက်ရှိ -
العربية (အရဗ်) - Bahasa Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား) - Български (ဘူဂေးရီးယား) - Eesti (အက်စတီ) - Dansk (ဒိန်းမတ်) - עברית (ဟီဗြူး) - 한국어 (ကိုရီးယား) - Lietuvių (လစ်သူဧနီးယား) - Slovenčina (ဆလိုဗက်) - Slovenščina (ဆလိုဗေးနီးယား) - Српски (ဆားဘီးယား)
ဆောင်ပါး ၂၀,၀၀၀ ရွက်ထို့ထက်ရှိ -
Bahasa Melayu (ပသျှူး) - ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (ဗိဿနိုးပြည်ရမဏိပူရ) - Brezhoneg (ဗြေတွန်) - Bosanski (ဘော့စနီးယား) - Ελληνικά (ဂရိ) - English (simple) (အ‌ခြေခံအင်္ဂလိပ်) - Euskara (ဗစက) - فارسی (ပါရှာ) - Galego (ဂလေးရှန်း) - हिन्दी (ဟိန္ဒိ) - Hrvatski (ခရိုအေးရှား) - Íslenska (အိုက်စလန်) - ქართული (ဂျော်ဂျီယာ) - Latina (လာတင်) - Lëtzebuergesch (လူဇင်ဘတ်) - Norsk (nynorsk) (နော်ဝေး) - Shqip ( အယ်ဘေးနီးယား) - ไทย (ထိုင်း) - Tiếng Việt (ဗီယက်နမ်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Hintha/ဗဟိုစာမျက်နှာအကြံ&oldid=240308" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၅၊ ၀၄:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။